Leaking the news out of Zimbabwe (+photos, video, links) - NZ Herald
25 Jun, 2008 8:15am Quick Read
Corby soap opera - sordid little drama that keeps on giving
26 Jun, 2008 5:00am 3 minutes to read
Leaking the news out of Zimbabwe (+photos, video, links)
25 Jun, 2008 2:50pm
By: Alan Willians
International news agencies' access to Zimbabwe is strictly limited, but a steady stream of information about the situation there does manage to get out to the wider world. Below are examples of some of the video evidence available online and links to sites which provide a lifeline to Zimbabweans
Zimbabwean Kiwis wanting to keep updated and in touch with loved ones in their troubled homeland are using a number of options available to them.
Save Zimbabwe campaign general secretary Mandla Akhe said the community was using the internet and cellphones to communicate with relatives and friends at home.
"We are online and have regular contact via text messaging," Mr Akhe said.
"There are a number of websites I trust to keep track of events in Zimbabwe."
Fellow Zimbabwean Vimbay Nathan said she visited a number of websites she regarded as credible, but questioned most reports that were coming out of Zimbabwe because of the current climate of instability.
"I tend to question all reports on Zimbabwe, although keeping in touch with friends and family in Zimbabwe via email tends to gives things balance and lend perspective," Ms Nathan said
INTERNATIONAL MEDIA COVERAGE OF ZIMBABWE
VIDEO FOOTAGE FROM INSIDE ZIMBABWE
Report on election violence
Interview with Morgan Tsvangari (May)
Life in a Zimbabwe orphanage
Unicef on googlevideo.com:
Zanu PF patrolling the streets armed with sticks, confront camera crew
Al Jazeera on YouTube: